Dhaamsa “Dargaggeessaa” Dargaggootaaf
Dargaggoonni humna biyyaati. Humna hojiitis. Dargaggummaan umrii waan hundaa hubachaa, jireenya egereetiif itti hojjetaniifi biyya ijaaraniidha. Humnaafi dhiigni dargaggummaa kan irraa calaqqisuufi umrii ga'eessaa kan qaban Ministirri Muummee Itoophiyaa haaraan Doktar Abiyyi Ahmad, ittigaafatamummaa itti kennameef kophaasaanii waan ba'achuu hindandeenyeef, humna ho'aa biyyattiin qabdummoo humna dargaggootaatiif waamicha dhiyyeessaniiru.
Doktar Abiyyi, Wiixata wayitaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti dhiyaatanii kakuu seenaniifi haasawa taasisanitti, yeroowwan fuulduraa jiranitti dargaggootaaf hojii uumuu qofa utuu hintaane darggoota abbootii qabeenyaa ta'an horachuuf akka hojjetaniidha kan dubbatan.
Itoophiyaan kan dargaggootaa waan taateef, waggoonni fuuldura jiran hunda caalaa kan dargaggootaati. Ijaarsa biyyaa keessatti adda durummaadhaan hirmaachuu akka qabanis dhaaman.
Gaaffiin dargaggootaa fayyadamummaa dinagdee walqixaa ta'e argachuu qofa utuu hintaane, gaaffii dimokraasiifi haqaati. Fayyadamummaa dinagdee, haqa hawaasummaafi hirmaannaan siyaasaa keessatti, hirmaannaa lammiilee hundaa guddisuuf hanqinni akka tureedha kan eeran.
Biyyattiin guddina dinagdee gaarii galmeessisaa jiraattullee, guddinichi sadarkaa barbaadamuun fedhii dhaloota dargaggeessaa kan gammachiisu hinturre. Kunis hawaasa aariif akka saaxile kan amanan ta'uu ibsuun, hirmaannaa dargaggootaatiin alatti biyyi eessayyu ga'uu akka hindandeenye dubbatan.
Itoophiyaan dargaggootasheetiif abdiidha malee biyya abdii kutachiistu akka hintaane waan danda'amu mara gochuufis waadaa akka seenan himan. Yeroowwan dhufanitti dargaggootaaf carraa hojii uumuu qofa utuu hintaane, dargaggoota abbootii qabeenyaa baay'inaan akka horatamaniif kan hojjetan ta'uudha kan eeran.
Kanaafis ilaalchota gufuu ta'aniifi hojmaata loogdummaa of keessaa qaban dhabamsiisuudhaan sirni hawaas-dinagdee haqa qabeessaa akka jiraatuuf mootummaan haala mijataa kan uumu ta'uu ibsu.
Dhugaan irraanfatamuu hinqabane garuu jedhu Doktar Abiyyi, biyyasaatiif hojiifi tattaffisaatiin qabeenyaa horachuu kan danda'u dargaggeessuma mataasaati.
Gama biraatiin, dubartoonni bu'aa bayii baay'ee keessa darbuudhaan dhaloota horuudhaan har'a kan ga'ame yoo ta'u, fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuufi biyya guddina gama hundaan itti tarkaanfataa jirtuuf gaheesanii akka bahataniif hojiileen gara garaa hojjetamaa jiraatullee, kanneen hojjetamanirra kanneen hinhojjetamne akka heddummatan dubbatu. Kanaaf, fuulduratti dubartoonni guddinaafi badhaadhina akkasumas siyaasa biyyattiif gaheessanii akka bahatan abdii qaban himan.
Eenyummaan biyyattii dubartoota lammiilee Itoophiyaa ta'aniin alatti akkasumaan waan ta'eef, beekamtii dubartoota dhowwachuun ijaarsa biyyaa mirkaneessuun hindanda'amu jedhan.
Mootummaan mirgaafi walqixxummaa dubartootaatiif kan dhaabbatu, oolmaa dubartootaaf jedhee utuu hintaane hunda keenyaaf jedhameeti jedhan. Biyyi gartokkee qaamashee irraanfatte biyya ta'uu waan hindandeenyeef, hirmaannaafi fayyadamummaa dubartootaa hundagaleessaaf kutatummaan kan hojjetan ta'uu waadaa seenan.
Walumaagalatti, humni dargaggummaa kan darbuufi dhumuudha. Humna ganamaa kanatti dhimma ba'uudhaan jijjiiramaa waliinii, biyyaafi ofiitiif tattafachuun murteessaadha. Biyya guutuu taatee ijaaruuf, kaan duubatti irraanfachuun utuu hintaane kan hunda hammate yoo ta'e bareeda. Kanaaf, dubartoonnis ijaarsa biyyaafi guddina ittaanuuf gumaachuuf walcina hiriiruun murteessaa ta'a.
Torban kana/This_Week 4289
Guyyaa mara/All_Days 1641884